आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल बढुवा भएलगत्तै रमेश खरेलद्वारा राजीनामा घोषणा - Everest Dainik - News from Nepal
आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल बढुवा भएलगत्तै रमेश खरेलद्वारा राजीनामा घोषणा
काठमाडौं, चैत २८ । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रहरीको छबी र उचाई बढाउन दृणसंकल्पसाथ लाग्ने छु : आइजीपी खनाल
पद्धति बसाएर निर्णय गर्नुपर्छ । भागबन्डा नहुने भएमात्र प्रहरीभित्र पनि असल संस्कार बस्न सक्छ । म भलिबल खेलाडीका रूपमा प्रहरी जवान भई यो संगठनमा छिरेको हुँ । प्रहरी जवानकै रूपमा प्रवेश गर्दा पनि म एक दिन शीर्षस्थ स्थानबाट नेपाल प्रहरीलाई हाँक्छु भन्ने सपना देखेको थिएँ । त्यही सपना पूरा गर्न मैले जानजान गल्ती कहिल्यै गरिनँ । तर, त्यो अवसर पाइनँ । हीन भावना बोकेर बसेँ भने पनि संगठनलाई शतप्रतिशत नतिजा दिन सक्दिनँ । त्यसैले बिदा हुने निर्णय गरेको छु ।
सरकारले कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो, एकजनालाई दियो । तपाईंप्रति अन्याय के भयो ?
दाबेदार सबैले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । मैले पनि ठानेँ, के बिराएँ ? प्रमाण पेस गर्न सक्दिनँ । मूल्यांकन अरुले गर्ने हो ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ आइजीपी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि